Bafuna izimpendulo ngokwenzeka ePhoenix - Ilanga News
Home Izindaba Bafuna izimpendulo ngokwenzeka ePhoenix
Bathi lushaya ngonwabu uphenyo lwamaphoyisa ngababulewe
Bekugadwe ngezinhlokohlela zezibhamu kukhona namasosha abeqaphe isimo ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa ePhoenix. IZITHOMBE NGU: SANDILE MAKHOBA
KULINDELEKE ukuba bavele namuhla enkantolo yasePhoenix abaso-lwa abawu-7 kwabawu-8 abathinteka ekubulaweni kwabantu ePhoenix, eThekwini ngesikhathi sezibhelu zokutatshwa kwempahla ezitolo, ezinye zishiswa, njengoba kubikwa ukuthi abanye babantu babezihambela nje, kule ndawo bengahlangene nabatapayo, kodwa babulawa.
Abasolwa baboshwa nje, ngo-Lwesihlanu amalungu e-ANC Youth League (ANCYL) – engenabo ubuholi njengoba selokhu yagcina ukuba nobuqondile ngo-2018, umengameli wayo kunguMnu Collen Maine – inqume ukuvimba-nisa emigwaqweni yasePhoenix, ifuna izimpendulo mayelana nokushaya ngolonwabu kophenyo lwamaphoyisa.
La malungu e-ANCYL abephuma emagatsheni ahlukene aseThekwini, aqale ngokuya emakhazeni kahulumeni asePhoenix akule ndawo, efuna izimpe-ndulo mayelana nokuthi kungani imindeni ingazitholi izidumbu zezihlobo zayo ezabulawa kule ndawo, okuvele ukuthi zisaduve kula makhaza.
Aphinde ayovala imigwaqo ngaphambi kwesiteshi samaphoyisa eyobuza khona ukuthi kwenziwa yini kuchitheke igazi labantu abaningi kangaka kodwa kungaboshwa muntu kuze kuphele isikhathi eside, yize kunezithombe okuthiwa ngezabasolwa, ezibona-kala ezinkundleni zokuxhumana.
UMnu Lindokuhle Xulu, we-ANCYL eMusa Dladla Region, ubengomunye wabebehamba phambili kule mashi, uthe beyi-ntsha babone ukuthi sekuyisikha-thi sokuthi nabo bakhombise ukungenami ngokubulawa kwabantu, kodwa kubonakale
sengathi ingalo yomthetho akukho ekwenzayo.
“Njengoba sizifikele mathupha lapha, sifuna ukuzobuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi kufe abantu bakithi abaningi kangaka kodwa singezwa lutho ngokuboshwa kwabantu abayizigilamkhuba.
“Sigcine singatholanga ukuthi zingaki izidumbu zabantu ezikhona emakhazeni. Kuyasikhathaza ukuthi amaphoyisa agijimela
ukubopha abantu abangachitha-nga gazi, kodwa labo izandla zabo ezigcwele igazi, bayachanasa ngaphandle,” kusho uMnu Xulu.
UNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele, uke waya ePhoenix amahlandla amaningana emuva kwemibiko yokubulawa kwabantu, wathi kunethimba eliyisipesheli eselijutshwe ukuphe-nya ngokubulawa kwabantu kule ndawo.
Isitatimende esikhishwe ngamaphoyisa egameni likaColonel Brenda Muridili noMajor General Mathapelo Peters, sikuqinisekisile ukuthi amaphoyisa asebophe abasolwa abawu-8, oyedwa usevelile enkantolo, kanti abawu-7 kulindeleke ukuba bavele namuhla.
Previous articleUsomatekisi ubulawe ngentululwane
Next articleUsephenduke iqaqa umfundisi waseWeseli